China 55 HRC Carbide4Flute Roughing End Mill ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ | မင်္ဂလာဆောင်
သာမန်လျှော့စျေးအဆုံး Mills - 55 HR ...
မြင့်မားသော wear ခံနိုင်မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် tungsten သံမဏိပစ္စည်းများ၏အလွန်ပါးလွှာသောအမှုန်အသစ်များအသုံးပြုမှုအားလုံးပတ် ၀ န်းကျင်ကြိတ်ခွဲစက်အတွက်အထူးသီးသန့်မြန်သောဖြတ်တောက်ခြင်း application များ။
ကြေးနီ၊ သံမဏိ၊ အလွိုင်းစတီး၊ ကိရိယာစတီး၊ မီးငြိမ်းသတ်ထားသောသံမဏိ၊ ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံ၊ အပူဖြင့်ခိုင်ခံ့သောသံမဏိ
ထိရောက်စွာအလုပ်လုပ် Device ကို
1.HRC: ၅၅ HRC
2.Coated: AlTiN, TiAlN, TiAISI, TiSiN, TiN, DLC, Nano, စိန်
၃. ပလပ်စတစ်၊ သစ်၊ Aluminium.copper၊ သံ၊ ကာဗွန်သံမဏိ၊ မှိုသံမဏိ၊ သံမဏိ၊ တိုက်တေနီယမ်၊ ကိရိယာသံမဏိနှင့်အပူသုံးသံမဏိများပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
1.Special ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်း: အထူးဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်းကိုတိုးစေသည်။ ကိရိယာများနှင့်စက်များ၏သက်တမ်းသည်ကြာရှည်လိမ့်မည်
2. အချောနှင့်ကျယ်ပြန့်ပုလွေ: ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်ကျယ်သောပုလွေသည်ရှကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။
3. အပူထိန်းနိုင်သည့်အပေါ်ယံလွှာ: မြင့်မားသောအပူခံနိုင်ရည်ရှိသည့် HELICA သုတ်ဆေးဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်သောလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်
၄ ။လိမ္မော်ရောင်အပေါ်ယံပိုင်း: လိမ္မော်ရောင်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည့်အတွက်ပွန်းပဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လွယ်ကူပါသည်
5. အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်း: ကုန်ကြမ်းများကိုမာကျောမှုမြင့်မား။ စပါးအရွယ်ကာဗွန်အဖြိုက်နက်များအသုံးပြုသည်။
6.Polished မျက်နှာပြင်ကုသ: မြင့်မားသောပွတ်တိုက်မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပွတ်တိုက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်၊ ခုံ၏ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်၊ ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ပိုမိုချွေတာနိုင်သည်။
ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအရှေ့ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အရှေ့၊ အာဖရိကနှင့်တောင်အမေရိကစသည်တို့သို့တင်ပို့သည်။ စသည်တို့တွင် Isuzu အစိတ်အပိုင်းများကိုပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပတွင် ၁၃ နှစ်ကြာပညာအပြည့်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းနှင့်ခေတ်မီအီလက်ထရောနစ် Isuzu အစိတ်အပိုင်းများစစ်ဆေးခြင်းစနစ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးသားဖြောင့်မတ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ဦး စား ပေး၍ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် ဦး စား ပေး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်ကမ်းလှမ်းသည်။
ရှေ့သို့ Aluminum တစ်ခုတည်းသောအစွန်းအတွက် 55 HRC Carbide3Flute Standard Length End Mills များ
နောက်တစ်ခု: 55 HRC Carbide4Flute စံအလျားထောင့်အချင်းဝက်အဆုံးစက်များ
လူပျိုပုလွေ Carbide အဆုံးစက်